Valentine ngoFebruwari 14, 2018 isoka ethandekayo, intombi, intombi e-sms, izinkondlo, izithombe ngokuhalalisela
I-Valentine ngo-February 14, 2018 - ethinta izinyembezi
Ama-valentines amahle, izithombe namakhadi okubonga kuzosiza wonke umuntu ukuveza uthando lwakhe nesihawu ngoSuku Luka-Valentine. Kuleliholidi sincoma ukuthi silungiselele kusengaphambili. Ngamavesi esasiwuthathe, ungathumela imilayezo yokubhalisa isoka noma intombi yakho ethandekayo, indoda nomkayo. I-valentine epholile ngo-February 14, 2018 izosiza ukuveza umuzwa ofudumele kumngane, abangane noma abazali. Kuyadingeka ukuthi sijwayele izibonelo zethu zokuhalalisela futhi sikhethe okuhle phakathi kwabo.
Usuku luka-Valentine olungcono kakhulu ngoFebhuwari 14, 2018 - izinkondlo ngokuhalalisela
Into esemqoka kunoma yiliphi i-valentine yiklamo nemibhalo. Ngosizo lwabo, ungakwazi ukuveza imizwa efudumele kakhulu kubangani bakho nabathandekayo bakho. Thatha izinkondlo ezinhle zokuhalalisela amakhadi kaValentine's Valentine ngoFebhuwari 14, 2018, phakathi kwezibonelo ezikhethiwe.
Okuncoma kakhulu ezinkondlweni zokugcwalisa ama-valentines ngoFebhuwari 14, 2014
Izinkondlo ezincane zingasetshenziswa ukugcwalisa amakhadi athengiwe noma ayenziwe. Sakhetha izifiso ezithinta kakhulu futhi ezithandekayo kubangani, abazali kanye namashumi ama-half.
Nginika inhliziyo yami i-valentine:
Kuye kukhona injabulo, umusa kanye nothando.
Ngifuna umphefumulo wami womshado,
Ngibhala izinkondlo futhi!
Vumela inhliziyo ngenkathi isizungu,
Njengasemkhakheni wembali elimnandi.
Kodwa ngiyakholwa, ngizoyithola ngokungazi
Mina emphefumulweni womunye umuntu u-spark!
Manje ake ngikuhalalisele
Wena ngalolu suku oluhle.
Uthando, njenge-muse, ludumisa
Emphefumulweni wami oyedwa!
I-valentine yami kuwe iyisithunywa samandla aphezulu, eqondiswa isandla sami nothando, esibizwa ukuba sibophe imiphefumulo yethu ndawonye futhi sibuye sihlanganise imizimba ngokuphefumula okulodwa emva kwesikhathi se-bouquet-candy sobuhlobo bethu sidlulela esiteji sobuhlobo phakathi kwabantu abathandekayo.
Bangaki babo? Ungabala!
Zonke izinhliziyo ezithombeni
Leli holide liyabathandi,
Inhliziyo yabo imizwa kuphela yokushisa!
Mina, nginithatha phakade,
Ngikunika impilo yami njengesipho!
Yamukela noma cha -
Ngimi ungukukhanya kwelanga!
Uyazi, ngaya emfuleni,
Lapho amanzi afriziwe -
Ukuletha inhliziyo -
Ikhadi le-Valentine kusuka eqhweni.
Kodwa uthando lwami lufudumele,
Kunomlilo ovela kwamakhandlela ayikhulu.
Mhlawumbe ngiyakwazi ukuyihlanganisa ndawonye
Ngiphuma ekukhanyeni kwelanga
Inhliziyo inkulu kuwe.
Ukushisa? Futhi ephila -
Ungathanda kanjani uphawu lwami?
Emhlabeni akukho ikhadi leposi,
Ukumomotheka kwakho kuphela
Ngizokunika inhliziyo yami.
Namuhla, abathandi baneholide,
Ngithemba ukuthi uyayikhumbula!
I-valentine - i-ray ekhanyayo,
Phakathi kwansuku zonke ukuphikisana.
Futhi imizwa yomshoshaphansi ungumlandisi,
Futhi enhliziyweni yokhiye wokuthuthumela,
Ithemba lami leveli!
Ngiyajabula emicabangweni yami,
Futhi ngezimzwelo zobumnene ngiyavuma -
I-Fairy enhle iyathandwa!
I-video valentines engcono kakhulu ngo-February 14, 2018 ngokuhalalisela evesini
Sihalalisela kahle othandekayo emavesini angakwazi futhi ngosizo lwevidiyo ye-valentines yokuqala. Khetha inguqulo enhle yokuhalalisela phakathi kwezibonelo ezingezansi akulula.
I-valentine enhle kakhulu ngo-February 14 eyintandokazi ka-2018 - ukukhethwa kwezithombe
Siyakuhalalisela othandekayo wakho kuphela ukuthi angathenga kuphela amakhadikhadi, kodwa izithombe ezibonakalayo. Sithatha izithombe ngamahlaya, sihalalisela futhi simane imidwebo emihle. Ama-valentine anjalo angathunyelwa ngoFebhuwari 14, 2018 kulesoka noma othandekayo wakho othandekayo.
Izithombe ezimnandi-ama-valentines omfana othandekayo, umyeni wakhe ngo-February 14, 2018
Sithole izithombe zika-Valentine ongazithumela kuzithunywa ezithuthumayo, amanethiwekhi omphakathi. Akulungele hhayi nje kuphela "ingxenye" ​​yamanje yabafundi bethu. Ama-postcards amahle nezithombe kungathunyelwa ngisho naseseshini noma indoda.
Ama-Valentines amasha nge-SMS ngo-February 14 - ukukhethwa kwezinkondlo ezinhle kakhulu ezinyembezini
Amavesi amancane alula kakhulu ukuhalalisela abathandekayo bakho nabangani nge SMS. Kunconywa ukuba ithumele imilayezo enezinsimbi, ukumamatheka okumibalabala noma hyphas. Izithasiselo ezimnandi zizogcizelela i-prikolnyvalentinka emavesini amafushane, athunyelwe kubangani ngeholidi ngoFebhuwari 14.
Ukukhethwa kwama-SMS-valentines amafishane amahle kakhulu ngo-February 14
Phakathi kokuhluka kwe-SMS esiyithathile, ungathola amahle ezinyembezini emavesini, kanye nemisebenzi elula. Amatheksthi afushane afanele ukugcwalisa amakhadi amancane okuthenga noma adalwe ngezandla zabo.
Ngifuna ukukukhuza futhi ngikulile, uthinte izindebe zakho, hhayi emicabangweni yakho - empeleni futhi ukuhleka indlebe endlebeni yakho - "Nginani, ngithande njengoba ngikuthanda" ...
Angikaze ngimthande kakhulu umuntu futhi angisoze ngithandana, nakuba angizange ngikuvule inhliziyo yakho, ngisayigcina isithombe sakho kuso.
Ngosuku luka-Valentine Ngiyavuma: Ngiyakuthanda, futhi ngithemba ukuphindaphindiwe. Ungiphendula, ngilinde.
Vumela i-rastaet in the sertce ldynka - prachyta yami valentynka!
Uthando! Uthando luhlukile! Uthando! Awekho amahloni kulokhu! Uthando, ukuthi wonke umuntu wayekubona, futhi angase athi: Yilokho!
Intombazane enhle yama-valentine ngo-February 14 wonyaka - ukukhethwa kwamaphostakhadi nezithombe
Umngane othandekayo kumele athokoziswe ngosuku lwabo bonke abathandi. Kulesi simo, ungamthumeli nje amaphostakhadi, kodwa futhi nesithombe namahlaya, izithombe ezihlekisayo. Sithathe i-valentines ezithakazelisayo kakhulu nokungezona ezejwayelekile ngoFebhuwari 14, 2018, okufana nabangani bangempela.
Ama-valentines amnandi ezithombeni nakuma-postcard weSonto lika-Valentine ngoFebhuwari 14 ngomngane
Ngifisa intombi yakho konke okuhle ngosuku lukaValentine ngezindlela ezahlukene. Isibonelo, thumela ama-sms akhe, unike ikhadi lokuposa ngezinkondlo. Kodwa futhi abafundi bethu bawusizo funny anti-valentines. Izithombe ezinjalo namahlaya zizokwenza umamukeli ukumomotheka ngobuqotho nangomusa.
Beautiful kuya izinyembezi valentine ngoFebhuwari intombazane 14 - ukukhethwa izinkondlo for othandekayo
Usuku lwabo bonke abathandi abanesineke esikhethekile abalinde abesifazane. Ngempela, kuleli holide, amadoda abo abathandekayo azobanika ukunakekelwa okufanele futhi abonise imizwa yabo. Kubamele abalingani obuqine, sathola izinkondlo zangempela ngokuhalalisela
Ama-valentines, athunyelwe noma athumele amantombazane ngeholidi ngoFebhuwari 14.
Amazwi amahle amahlombe ama-valentines eholide ngoFebruwari 14 ngentombazane ethandekayo, umfazi
Sakhetha amavesi amahle omuntu angathumela intombazane ethandekayo ngoFebruwari 14 embikweni wombhalo, isithunywa noma i-social network. Ukuthinta amathekisthi ngokuqinisekile kuyothinta bonke abesifazane.
Othandekayo, onomusa nomnene,
Futhi okubaluleke kakhulu, yimi kuphela,
Ngosuku luka-Valentine awunakuqhathaniswa,
Usuku lwabathandi, iholidi lethu!
Siyakuhalalisela futhi wonke,
Kuningi kakhulu, izikhathi eziningi,
Lo othandekayo, othandekayo!
Futhi ngifakazela ukuvuma
Ngikuhalalisela ngokuthokoza kwami
Ngiphendule ngokushesha ngangokunokwenzeka!
Amavesi ubusuku bonke engiwubhala
Amazwi othando ahlelwa kabusha!
Yini ngaphandle kwakho, ngingaphansi kwe-kapec ...
Ngiphazamiseke ukubukeka kwakho ngobumnene
Uma ubheka kimi.
Futhi ngiyabukeka ngesabekayo
Ngamafuphi ... ngiyakuthanda!
Kubafundi bethu, sithathe i-valentines yasekuqaleni ezithombeni naseposikhadi, isithombe. Ngezibonelo zethu, abafundi bangakhetha kalula izinkondlo ezinhle ngokuhalalisela. Bayosiza ukuveza kahle ukubonga nokuhlonipha intombazane ethandekayo, umfazi. Futhi, amahle ezinyembezi ze-valentine ngo-February 14, 2018 angathunyelwa kumyeni wakhe noma isoka lakhe. Izithombe ezithandekayo futhi zihalalisela ngamahlaya ziphelele ukuhalalisela abangane nezintombi.
Siyakuhalalisela abathandi bezinkondlo kanye ne-prose - enhle, emfushane futhi ehlekisayo. Siyakuhalalisela abashadile abathandi ngoFebhuwari 14 nangosuku lokuzijwayeza - izithombe nama-SMS
Ungenza kanjani i-valentine yangempela ngokwakho?
Indlela yokuhalalisela indoda yakho ethandekayo ngoFebhuwari 23
Okufanele ukwenze uma imizwa yendoda ibanda
Izimbali zaseJalimane: Izikhathi ezingapheli Nerine
Ama-Meatballs ane pepper elimnandi ku-sauce e-creamyard ekhanda
Ungazi kanjani ukukhula kwengane yakho engakazalwa?
Umfazi wokuqala kaDmitry Tarasova uhleka usulu u-Anastasia Kostenko, ividiyo
Negative Rh factor, isisu
Yini eyenza ukufakwa kwezipikili
Izingane. Ngokushesha kuyoba khona ababili!